IMac ee midabada ayaa sidoo kale boos ku yeelan doona dhacdada Apple ee soo socota | Waxaan ka imid mac
Maalinta xigta 14 waxaan mar kale yeelan doonnaa dhacdo Apple ah. Kulanku wuxuu ka dhici doonaa khadka tooska ah wax kasta oo ka sarreeya waxaan arki doonnaa soo -saarista iPhone -ka cusub, Apple Watch, AirPods 3. Laakiin sida ku xusan wararka cusub ee ka soo baxay gacanta Mark Gurman oo ka yimid Blommberg, waxaa jiri doona meel bannaan oo looga hadlo iMac cusub oo midab leh. Xusuusnow in hadda toddobada midab midkoodna aan laga heli karin Dukaanka Apple, laakiin laga bilaabo Talaadada soo socota waxaa suurtogal ah inay yihiin.
Markii Apple ay soo saartay iMac -ga cusub, waxay la yaabeen tirada midabkooda kala duwan. Toddoba. Laakiin sida caadiga ah ee Apple, waxaan haysannay mid ka mid ah lime iyo mid kale oo ciid ah. Toddobada midab midkood lagama helin Dukaanka Apple:
Iyada oo leh naqshad cajiib ah oo leh midabyo kala duwan oo firfircoon, M1 chip cusub iyo muuqaal 4.5K Retina ah oo qurux badan, iMac -ga cusub waa mid aad u kooban oo si fudud ugu habboon xitaa meelo badan, oo u beddelaya meel kasta wax kasta oo adeegsadayaashu u baahan yihiin. Dejinta iMac ee Cagaaran, Pink, Buluug iyo Qalin ayaa laga heli doonaa si toos ah looga iibsado apple.com iyo goobaha Dukaanka Apple, iyo dhammaan toddobada midab waxay ka heli doonaan apple.com.
Taasi way isbeddeli kartaa laga bilaabo Sebtember 14, maxaa yeelay sida uu qabo Mark Gurman oo ka tirsan Bloomberg Apple ayaa ku dhawaaqi doonta munaasabadda in dhammaan midabada iMac hadda laga iibsan karo Dukaanka Apple jir ahaan:
Ma aha iPhone iyo Apple Watch kaliya, qaar ka mid ah wararka yar yar ee Mac si loo ilaaliyo 14-ka Sebtember: Apple waxay bilaabi doontaa inay iibiso dhammaan 24-inji M1 iMac midabada dukaamada tafaariiqda. Jaale, oranji, iyo guduud ayaa hore looga heli jiray oo keliya internetka.
Kaliya maahan iPhone iyo Apple Watch, qaar ka mid ah wararka yar yar ee Mac si loo ilaaliyo Sebtember 14: Apple waxay bilaabi doontaa inay ku iibiso dhammaan 1-inji M24 iMac midabada dukaamada tafaariiqda. The jaale, oranji iyo guduud ayaa la heli karay hore online kaliya.
Marka, haddii aad go'aansatay inaad ku iibsato iMac khadka tooska ah mid ka mid ah midabadaas, xoogaa sug si aad u ogaato in xantaani rumowdo iyo in kale waxaad aadi kartaa dukaanka si aad u aragto midabka meesha yaal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » IMac ee midabada ayaa sidoo kale boos ku yeelan doona dhacdada Apple ee soo socota